प्रधानन्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशको अधिकार खोस्ने निर्णय, सर्वोच्चमा खैलाबैला ! – GALAXY
प्रधानन्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशको अधिकार खोस्ने निर्णय, सर्वोच्चमा खैलाबैला !
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रको पक्षमा माहोल बनेको छ । उनको राजीनामा टर्ने संकेत देखिएको छ । गोला प्रक्रियाबाट मुद्दाको दैनिक पेसी तोक्न नियमावली र निर्देशिका संशोधन गर्दै न्यायपालिकामा देखिएको समस्या समाधान उन्मुखतिर गएको छ।
झन्डै चार सातादेखि अवरुद्ध न्याय सम्पादन सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार बसेको पूर्ण ९सबै न्यायाधीश सम्मिलित० बैठकले गोला प्रक्रियामा पेसी तोक्ने निर्णय गरेपछि समाधान उन्मुख भएको हो।
सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार नियमावलीको दोस्रो संशोधन आवश्यक परिमार्जनसहित पारित गर्ने निर्णय भएको छ। सर्वोच्च अदालतअगाडि कानुन व्यवसायी र प्रहरीबीच बिहीबार भएको धरपकड घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै बैठकले सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ।
गोला प्रक्रियामा जानका लागि सुझाव दिन न्यायाधीश मीरा खड्काको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई धन्यवाद दिने निर्णय बैठकले गरेको छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ